UKhomishani Ophakeme waseCanada eJamaica Uvakashela uNgqongqoshe Wezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » UKhomishani Ophakeme waseCanada eJamaica Uvakashela uNgqongqoshe Wezokuvakasha
Ucingo lokuzithoba eJamaica
Ungqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, obonwe ngakwesokudla esithombeni, ujoyina uKhomishani Ophakeme waseCanada eJamaica, uMhlonishwa u-Emina Tudakovic (phakathi nendawo) kanye noNobhala Ongunaphakade eMnyangweni Wezokuvakasha, uJennifer Griffith, njengoba bemisa amalensi ngesikhathi senhlonipho yakamuva ucingo lukaKhomishani oPhakeme emahhovisi oMnyango eNew Kingston.
Etafuleni lokuxoxwa bekukhona izindlela iJamaica neCanada abangaqhubeka ngazo ukubambisana ezindaweni ezifana nezokuvakasha.
Umkhakha wezokuvakasha uhlinzeka ngenjini yokukhulisa umnotho waseJamaican.
Kudingeka ubudlelwano obuzinikele phakathi kwemikhakha yomphakathi kanye nezizimele ukufeza izinhloso ezibekiwe, emaphakathi nezinhlelo zoMnyango Wezokuvakasha.
Benze ingxoxo ebanzi mayelana nezinguquko embonini yezokuvakasha ngemuva kwesifo i-COVID-19, kanye nezindlela iJamaica neCanada abangaqhubeka ngazo ukubambisana ezindaweni ezifana nezokuvakasha.
The Umnyango Wezokuvakasha waseJamaica futhi izinhlangano zayo zisemkhankasweni wokuthuthukisa nokuguqula umkhiqizo wezokuvakasha waseJamaica, ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi izinzuzo ezivela emkhakheni wezokuvakasha ziyakhuliswa kubo bonke abantu baseJamaica. Kuze kube manje isebenzise izinqubomgomo namasu azohlinzeka ngomfutho wezokuvakasha njengenjini yokukhulisa umnotho waseJamaican. UMnyango usalokhu uzibophezele ekuqinisekiseni ukuthi umkhakha wezokuvakasha wenza umnikelo ophelele ongaba khona ekuthuthukisweni komnotho waseJamaica uma ubheka amandla awo amakhulu.